Shirkii Golaha Wasiirada oo Maanta Lagu Ansixiyay Sharciyada Maamulka Maaliyadda iyo Xakameynta Hubka
Thursday August 10, 2017 - 14:12:42 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharciga xakameynta Hubka wax dila, kaasoo ka mid noqonaya sharciyo horay Goluhu u ansixiyay.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa Wariyeyaasha u sheegay in Golaha Wasiirada ay si aqlabiyad leh ku ansixiyeen sharciga xakameynta hubka wax dila.
Sharcigan ayaa waxaa soo diyaariyay Wasaaradda Amniga gudaha, waxaana uu soo maray marxalado kala duwan.
Wasiir Yariisow ayaa sheegay in muddooyinkii la soo dhaafay laga hortagay falal amni daro, isagoo xusay in ansixinta sharcigan uu qeyb wanaagsan ka yahay howlaha socda.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa bishii May ku dhawaaqday howl gal loogu magac daray Xasilinta Caasimadda, iyadoo la dhisay Ciidamo si gaar ah oo horay magaalada uga sameeyay howl galo lagu uruurinayay hubka oo ka dhashay dhimasho iyo dhaawac.
Shirkaasi oo uu shir-guddoominayay Raiisul-wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa lagu meel-mariyay laba sharci oo kala ah:- sharciga Maamulka Maaliyadda iyo sharciga xakameynta Hubka wax dila.
Barlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay sharci muhiim u ah Qaranka Soomaaliyeed kaasi oo ahaa sharciga Isgaarsiinta Dalka.